Malaysia oo musaaafurisay nin Sacuudi ah oo nabiga (nnkh) si qaldan uga hadlay | Somaliska
Nin u dhashay dalka Saudi Arabia oo wadankaasi isaga cararay dhowr maalmood ka hor ka dib markii uu hadalo lidi ku ah nabiga (nnkh) ku qoray bogga Twitter ayaa dib loogu celiyay Sacuudiga.
Ninkaan oo lagu magacaabo Kashgari ayaa doonayay in uu u baxsado dalka New Zealand isagoo taransit ku ahaa Malaysia balse booliska Malaysia ayaa xabsiga dhigay ka dib markii ay booliska Sacuudigu codsadeen xiritaankiisa.
Kashgari oo wargeys Sacuudiga ka soo baxa qoraa ka ahaa ayaa qeylo dhaan ka dhaliyay Sacuudiga ka dib markii uu taariikhdii Mawliidka ku qoray hadalo isdaba joog ah bogga Twitter isagoo yiri.
“Dhalashadaada. Waxaan kugu arkaa meelkasta. Waxaan jeclaa qeybo ka mid ah waxyaabaha aad sameysay. Kuwa kalena waan necbaa, qaarna ma aanan fahmin” ayuu ku qoray Twitter isagoo ka hadlaayay Nabiga (nnkh). Waxyar ka dib ayuu tiray dhamaan hadalkiisii ka dib markii dad badan ay ka caroodeen hadalka.
Culumada sacuudiga ayaa ku baaqay in ninkaan midida la horgeeyo maadaama uu si qaldan uga hadlay nabiga. Diyaarada wada ninkaan oo ay wehliyaan booliska sacuudiga ayaa ka kacday Malaysia isagoo la filayo in lagu soo oogo dambiga u dhigna dhimasho.
Ururada u dooda xuquuqda dadka sida Amnesty ayaa ku dooday in aan ninkaan lagu celin Sacuudiga oo halkaas uu ku wajihi karo xeerka dhimashada.
Kashgari oo la hadlay wargeys inta uusan ka baxsan Sacuudiga ayaa sheegay in uu doonayay xuquuqdiisa xoriyada hadalka. Arintaas ayaa ka sii careysiisay Sacuudiga.
sc alxamdulilaah waan ku farxay in la qabtay xamzah kaashqari waxaanna kasii jeclaan lahaa in xukunka lagu fuliyo si uu cibra u noqdo waxii u horseedaayey
Waxaan u Maleeyay markii Hore In Jahli u Geeyay Hadalka , balse Markuu Waraysiga baxshay ku Yiri , waxaan Rabaa Hadalkaygaga Xoriyada , waa Qalad uu Kas u sameeyay .
Aflgaadada Nabiga waa Lagu Gaaloobaa xitaa Saxaabada , marka ninkaan Hadalkii Gaalada keenay ee leh Xoriyada Hadalka , Xoriyada Hadalku ma In Nabiga la caayaa !!
Lars Vilks Naclad haku dhacee ayaan ka joogi la’nahay ma wiil Sacuudiyaana oo dhahaa Xoriyad hadal ayaan rabaa .
Waa in uu Tawbad keenaa , ama haddii uu ku adkaysto waa in la waafajiyo Shareecada islaamka !!
nacalad kugudhacday dheh, asagoo kudhashay diintii suubanahu soogaarsiiyey ayuu hadana afkiisa qurunka ah wax ugasheegay? Koley gaalo waxba kuutarimeyso lakin way kubuunbuunin lanasoco sawirkaaga ayaaana dadbadan oo muslim ah baranayaaan si wadokasta aad marto ay noloshaada haliskugasho, eyxun,
asc walaal yaal waxaa xumaan ka nasahan nabigeena suuban nnkh inaan qofkasoo caayaa uusanba waxba caydiisu u dhimaynin maxaa yeelay waa qayru qalqilaah
February 13, 2012 at 21:19
Inaallilaahi wa inaa ilaahi raajucuun midkaan danbigisa ayuuba siiqiranaayaa oo maba ahan wax uu jahli ugeeyey ee waa ulakac in uu nabiga caayo (nnkh)!!!! war al-shabaab haloo geeyo ninkaan ayagaa sifiican ukawaanayee shaydaaanka…..
Allaa weyn says:
February 15, 2012 at 06:38
Dil buu mudanyahay iyo in seef qoorta lagaga gooyo, sucuudiguna u daahi mayo ninkan oo waa looma ooyaanka wadankaas Magaciisa foosha xun baan ka garanayaan… Asalkiisu meel daran iyo reero muskood buu ka yimid…
Warkan kan ku xigaa ha noqdo qoortaa laga gooyey…